Faaiidooyinka Uu Adeega eDahab Dalka Ku Soo Kordhiyay |
Hargeysa(Gnet)-Agaasimaha xafiiska eDahab ee shirkadda Dahab Shiil Fuaad Axmed Nuux, ayaa sheegay in adeega tiknoolajiyadeed ee eDahab uu wax weyn ku soo kordhiyay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee dalka islamarkaana uu keenay isbedel cusub.
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa shalay warbixin dheer ka qoray adeega lacagaha la isugu daro ee eDahab, waxaanu Mr. Nuux sheegay in adeegan ay hadda isticmaalaan hay’ado caalami ah oo ay ka mid yihiin kuwa Qaramada Midoobay. Madaxda eDahab wuxuu sheegay in shacabku ay hadda adeega eDahab isticmaalaan iyagoo jooga guryahooda ama magaalooyinkooda oo aan u soo dhaadhicin suuqyada, “Halkii ay [dadku] ka tagi lahaayeen suuqa si ay u sariftaan lacag, eDahab ayaa culayskaas fududeeyay, iyadoo la sameeyay xal ah in qofku sarifan karo lacagta isagoo isticmaalaya adeega electarooniga ah.” Ayuu yidhi Mr. Fuaad, waxaanu intaas raaciyay in ay adeega eDahab dhexdiisa ka diiwaangeliyeen sariflayaasha “Waxaanu samaynay inaanu damaanad qaadno in adeega sarifka ee elektarooniga ahi uu ka diiwaangashanyahay adeega electarooniga ah. Waxaanu diiwaangelinay ganacsatada sanduuqooda xisaabeed ku dhex wareejiya lacagta shisheeye.” Ayuu yidhi Fuaad, waxaanu hadalkiisa ku ladhay in qofka doonaya inuu lacag sariftaa uu si fudud u dhex galayo sanduuqa xisaabeed ee sariflaha oo uu dabadeed ka dhex bedelanayo lacagta, “Wuxuun buu u baahanyahay macmiilku inuu galo sanduuqa xisaabeed ee ganacsadaha iyo xadiga lacageed ee uu bedelanayo waxaanay ugu dhammaanaysaa daqiiqado gudahood.”
Wuxuu Fuaad sheegay in tiknoolajiyada eDahab ay aqoonsi ka heshay Xarunta Bill & Melinda Gates Foundation oo dadkii ay abaaruhu heleen lacago deeq ah u soo marisay tiknoolajiyada eDahab, isagoo xusay in hay’ado caalami ah oo kalena ay deeqaha u isticmaalaan eDahab, “Waxa isticmaala FAO, WFP iyo ururo kale oo badan oo hadda ku xidhan adeegyada oo ay caawimada si fudud oo toos ah ugu diraan dhulalka fog fog.” Ayuu yidhi Mr. Nuux.
Wuxuu Fuaad sheegay in hadda wixii ka dambeeya aanay macaamiishu suuqyada u iman doonin si ay lacagtooda ula baxaan balse ay isticmaali doonaan iyagoo meel kasta jooga adeega eDahab, “eDahab saamayn weyn ayuu yeeshay, wakhtigii hore dadku waxay magaalooyinka u soo socon jireen in badan si ay lacagta ugala baxaan laamaha. Qaarkood ayaa habeenkaas u hoyan jiray magaalada gaadiid la’aan darted.” Ayuu yidhi Fuaad oo ku tilmaamay wax hore oo laga soo gudbay oo uu bedelay adeega tiknoolajiyadu.
Guddoomiyaha shirkadda Dahab Shiil Cabdirashiid Dahab Shiil oo isna uu la kulmay saxafigan ka socday Daily Nation, ayaa sheegay in shacabku ka faa’iideen adeega eDahab, waxaanu tusaale u soo qaatay lacago deeq ay oo ay xarunta Bill & Melinda Gates Foundation sanadkii hore adeega eDahab u soo mariyeen dadkii ay abaaruhu waxyeeleeyeen.